Ho an’ny vehivavy ny ho avy… | NewsMada
Ho an’ny vehivavy ny ho avy…
8 marsa, Andro iraisam-pirenena ho an’ny vehivavy na ho an’ny zon’ny vehivavy. Nanambara voalohany ny 8 marsa ho andron’ny vehivavy ny olom-panjakana rosianina, Lénine. Ho fanomezam-boninahitra ny vehivavy noho ny hetsika voalohany tao Pétrograd, Rosia, ny 8 marsa 1917. Taty afara, vao nanaraka ny kaontinanta eoropeanina sy amerikanina. 60 taona aty aoriana, ny taona 1977, vao nanapa-kevitra ny Firenena mikambana (ONU) fa Andro iraisam-pirenena ho an’ny vehivavy ny 8 marsa.
Matoa misy ny Andro iraisam-pirenena ho an’ny vehivavy, mbola tsy misitraka tanteraka ny zony feno izy ireo. Maro ny mety antony: kolontsaina, fomba fijery, fiheverana, tarazo, tsy fahalalana … Lohahevitry ny fankalazana amin’ity taona ity ny hoe: “Andeha hanao dingana ho fampimirana lenta ny lahy sy ny vavy“. Eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena, misy ny antso ho an’ny rehetra mba hihainoana ny tena. Tsy inona izay fa firosoana ho amin’ny fitoviana sy ny rariny ho an’ny vehivavy rehetra.
Ankalazaina isan-taona ny 8 marsa eto amintsika, nanomboka ny taona 1977. Mby aiza? Anisan’ny lasa lavitra aty Afrika ny vehivavy malagasy eo amin’ny sehatry ny politika, fitantanan-draharaham-panjakana, fandraharahana, fahazoana maneho hevitra… Tsy iadiana fotsiny ny hoe zon’ny vehivavy amin’ny fitakiana, fihetsiketsehana amin’ny kabary sy filaharambe isan-taona mahazatra. Mila mirotsaka an-tsehatra isan’andro ny vehivavy. Na amin’ny asa izany, na fianarana, na fitenenana…
Izay firotsahana an-tsehatra izay tena ady amin’ny fampitovian-jo? Na fandraisana andraikitra fa tsy fitakiana fotsiny… Sao hisy hiteny indray hoe: hevi-behivavy io, fihetsiketsehan’ny vehivavy isan-taona, mahazatra. “Fanalam-baraka ny filazana ny vehivavy ho fanaka malemy; tsy rariny eo amin’ny olombelona amin’ny vehivavy izany. Raha ny tsy fampiasana herisetra no lalàna mifehy ny maha olombelona, ho an’ny vehivavy ny ho avy”, hoy ny filohan’i Inda taloha izay, Mahatma Gandhi. Mby aiza izany amin’izao?